NY FIASAM-PAHASOAVANA EO AMIN’NY FIANGONANA. – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 septembre 18, 2015 septembre 18, 2015 Laisser un commentaire sur NY FIASAM-PAHASOAVANA EO AMIN’NY FIANGONANA.
« Dia tsarovy ny amin’ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy, ka mibebaha. Koa raha tsy hiambina hianao, dia ho tonga toy ny fihavin’ny mpangalatra Aho, ka tsy ho fantatrao izay ora hihaviako aminao. » Apok 3:3
***Tany amboalohany Andriamanitra dia nifampiresaka mivantana tamin’ny olona noforonony. Anefa, rehefa tafalatsaka tamin’ny fahotana ny olona dia tsy nahatanty ny nifanatri-tava tamin’Ilay Mpamorona azy. Taty aoriana dia naniraka ireo mpaminany izay olombelona nampitondrain’Andriamanitra ny Teniny ho an’olona tahaka azy ihany Andriamanitra. Azo singanina amin’ireny i Abrahama, i Mosesy, ry Elia, ry Elisa, sy ny hafa… ary ny tena lehibe indrindra tamin’izany mpaminany izany dia i Jesosy Kristy.
***Tao ny nandray ny hafatra nentin’ireny mpaminany ireny, ary tao koa ireo tsy nandray. Ny hevitry ny teny hoe mpaminany eo amin’ny grika dia hoe mpitondra teny. Mpitondra tenin’i Jehovah Andriamanitra ny mpaminan’i Jehovah Andriamanitra. Tsy an’io mitondra teny io ny Teny fa mpitondra teny ihany izy.
***Mitondra fahasoavana ho an’izay mandray azy ny Teny nampitondraina! Miteraka finoana an’i Jehovah Andriamanitra ao anatin’ny olona ny fandraisana ny Teniny, ary manome azy fiainana mandrakizay. Ny fandrenesana izany Teny izany sy ny fankatoavana izany dia mahatonga ny olona ho zanak’Andriamanitra, izany hoe tsy hita pesipesenina ny herin’ny Teny raisina, sy iainana! Tsarovy ny amin’ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy ka mibebaha, fa raha tsy miambina isika dia ho tonga tahaka ny fihavin’ny mpangalatra Izy ary ho tahaka ireo virijiny dimy adala isika izay tsy ampy ny solika fitaizany ka voahidy any ivelany tsy voampakatra!
***Variana mitsikera ireny mpitondra hafatra ireny, ny olona sasany: Fa tonga Jaona tsy nihinana na nisotro, ka hoy ny olona: Manana demonia izy. Tonga ny Zanak’olona mihinana sy misotro kosa, ka hoy ny olona: indro olona fatra-pitia hanina sy mpisotro divay, sakaizan’ny mpamory hetra sy ny mpanota. Ary hoy Jesosy: Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy misy mpaminany izay ankasitrahana eo amin’ny taniny. Noho ny tsy fankasitrahana ny Tenin’andriamanitra nampitondraina sy ambara, ary indrindra ny fitsaràna ivelany natao ireo mpitondra-teny, dia tsy nandray fahasoavana avy amin’i Jehovah Andriamanitra ny olona.
***Mila mangataka sofina avy amin’i Jehovah Andriamanitra ny olona: Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ny fiangonana. Mila mamela ny Fanahy Masina, na mangataka ny Fanahy Masina ny olona hiasa amin’ny sofiny mba hihainoany izay lazain’ny Fanahy. Io Ilay Fanahy miara-milaza amin’ny fanahintsika hoe: zanak’ Andriamanitra isika!
Aiza ary no misy antsika ankehitriny? Efa nandray marina ve isika? Efa nandre marina ve isika? Raha efa nandray sy nandre marina isika dia aoka ho tanantsika mafy izany nandraisantsika sy nadrenesantsika izany ka hibebaka isika (miala amin’ny làlana ratsy ka miverina amin’Andriamanitra!)
Ny Tompo hampahery anao! Amen!
Publié parfilazantsaramada septembre 18, 2015 septembre 18, 2015 Publié dansUncategorized